သူတို့က iCloud အကောင့်ကိုစကားဝှက်မရှိဘဲဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းရှာတယ် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | iCloud, အိုင်ဖုန်းလုံခြုံရေး
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ iCloud ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြားခဲ့ရပါတယ် Apple က၎င်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော option တစ်ခုဖြစ်စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုထည့်သွင်းထားသည် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ (သို့) ကွန်ပျူတာများစသည့် Apple ထုတ်ကုန်အားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကသူမသေဆုံးမီလအနည်းငယ်က iCloud ကို iOS5နှင့်လက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီး Apple devices အားလုံး၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်၊ Cloud documents၊
စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏စကားအရ ၂၀၁၁ Developer Conference တွင် iCloud ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
သင်၏အချက်အလက်နှင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထားရှိရန်မှာယနေ့သည်အလွန်တကယ့်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာပြproblemနာဖြစ်သည်။ iCloud သည်သင်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထားပေးသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ကေဘယ်လ်များမရှိဘဲဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပလီကေးရှင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်သင်စဉ်းစားစရာမလိုပါ၊
1 Activation Lock ဆိုတာဘာလဲ။
2 ငါ iCloud စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
3 iCloud မှသော့ခတ်ထားသောကိရိယာကိုဝယ်ယူရန်မည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း။
4 iCloud Lock, iPhone, iPad နှင့် iPod Touch ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
5 iCl7ကပိတ်ထားတဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်နည်း
6 iCl 8 ကပိတ်ထားတဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်နည်း
7 iCloud မှသော့ခတ်ထားသော iPhone ကို iOS9/ iOS 10 / iOS 11 ဖြင့်သော့ဖွင့်နည်း
8 iCloud ကို Jailbreak လုပ်နိုင်ပါသလား။
Activation Lock ဆိုတာဘာလဲ။
iOS7ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ Apple သည်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ခိုးမှုခံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုပိတ်ဆို့ရန် option တစ်ခုကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့် Apple သည် iCloud ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ Apple ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းတယ် အသုံးပြုသူလုံခြုံရေးတိုးတက်စေရန်ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများပိုမိုမြင့်မားမှုကြောင့်၎င်းကိုမှောင်မိုက်စျေးကွက်အပေါ်အလိုရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သောဤကိရိယာ၏ခိုးမှုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားပါ။
iOS7ပါ ၀ င်သော activation lock ကို အသုံးပြု၍ device အခိုးခံရလျှင်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသောအခါသို့မဟုတ်မေ့သွားသည့်အချိန်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ iCloud ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ကိရိယာကိုအလျင်အမြန်နေရာချနိုင်သည်၊ ကောင်းမွန်သော Samaritan တစ်ခုကိုရှာတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ပို့ပါ၊ ပိတ်ဆို့ပါ၊ အသံထုတ်လွှတ်ပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုအဝေးမှဖျက်ပစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Device ကိုသော့ခတ်ပြီးတာနဲ့ terminal နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ iCloud အကောင့်ရဲ့စကားဝှက်မရှိပါက iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုခိုးယူလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် terminal ကိုအဖိုးတန်သော paperweight သို့ပြောင်းလိုက်ခြင်းသည်အသုံးမကျသောအလုပ်ဖြစ်သည်.
iOS7ဟာဒီ function ကိုရရှိနိုင်တဲ့ပထမဆုံး version ဖြစ်တယ်။ activation lock မှာ bug တစ်ခုရှိပြီး function ကိုပိတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာသည်iOS 7.1 ပါသော iPhone ကိုရှာတွေ့သူမည်သူမဆို iCloud အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုထည့်စရာမလိုဘဲ terminal ကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ Cupertino မှယောက်ျားများသည်ဤအရေးကြီးသောလုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်ကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်သိပ်မယူကြပါ။ လက်ရှိတွင် iCloud မှသော့ခတ်ထားသော iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအနည်းဆုံးသီအိုရီအရဆိုလျှင်၊ အွန်လိုင်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလျှင်၊ အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြပါ။
ငါ iCloud စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminals အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အဆိုးဆုံးအရာမဟုတ်ပါ Apple က၎င်းအားပြန်လည်ရယူရန်ခိုင်လုံသောရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမှတ်မိပါက Touch ID အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုအများအားဖြင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လျှောက်သွားရမည် https://iforgot.apple.com/password/verify/appleidApple ကသူတို့ရဲ့ iCloud အကောင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲဖို့သုံးစွဲသူများအားလုံးကိုပေးတဲ့စာမျက်နှာ။
Apple နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်မှတ်ထိုးသည့်အချိန်တွင်မေးမြန်းခဲ့သည့်အဓိကမေးခွန်းများ၏အဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့မမှတ်မိသည့်အခါပြcomesနာတက်သည်။ သတိရပါ ကျွန်တော်တို့တရားဝင်သုံးစွဲသူဖြစ်ကြောင်း Apple က ၁၀၀% အာမခံရမည် ဒီအကောင့်ရဲ့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမှတ်မိနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအကျွမ်းများ၏လက်လှမ်းမမီသောမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းရန်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်။
ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရသည် အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုမှအပန်းဖြေ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုစာရွက်စာတမ်းကောင်းကောင်းမဖြစ်စေလိုပါကအွန်လိုင်းရှာဖွေနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ Apple ကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုမျှမပေးသောကြောင့်၊ သော့၏အဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့မမှတ်မိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာမဟုတ်ပါ ကျနော်တို့ဥတု၏အချိန်မှာထူထောင်သောမေးခွန်းများကို။
တစ်ပတ်ရစ်ကိရိယာကို ၀ ယ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းသည်ခိုးယူခံရခြင်းရှိမရှိခွဲခြားသိမြင်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ပထမ ဦး စွာသင်ရှာဖွေရမယ် အကယ်၍ ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွင်သေတ္တာနှင့်အားသွင်းစက်တို့ပါ ၀ င်ပါကသန့်ရှင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်နားကြပ်များသောအားဖြင့်ငွေပေးငွေယူနှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်ကတည်းက။ အကယ်၍ ၎င်း၏ box နှင့် charger (ရောင်းရန်ကြော်ငြာများစွာပါရှိပါက) ရောင်းလိုက်သောမည်သည့် terminal မဆို၎င်းတို့ကိုလုံးဝမယုံကြည်ရပါ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ terminal ကိုမူလ box နှင့် charger (အရေးကြီး) နဲ့အတူရောင်းလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာပါ IMEI နံပါတ် (သို့) စက်ရဲ့အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုရှာပါ နှင့်အတွက်မိတ်ဆက်ပေး activation lock ရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးခွင့်ပေးတဲ့ Apple page။ အကယ်၍ terminal သည်အကောင့်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးသင်၏ Apple ID နှင့်အခြားသူမည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဆိုပါကဤစာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
iCloud Lock, iPhone, iPad နှင့် iPod Touch ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
iOS7ရောက်ရှိလာချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ID ကို terminal တွင်ထည့်တိုင်း Find My iPhone လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလိုအလျောက်သက်ဝင်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစက်ကိုအဝေးမှပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ID နှင့်ဆက်နွှယ်နေသဖြင့် အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပျောက်ဆုံးပါကသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုသော့ဖွင့ ်၍ ဆက်လက်သုံးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ function ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှအကြံပြုသည်။ Find my iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
iCloud ထဲမှာငါတို့ရွေးစရာရှိတယ် ကျွန်ုပ်၏ iPhone / iPad / iPod ကိုရှာပါ ကျွန်ုပ်တို့သုံးသော terminal ပေါ် မူတည်၍ ထိပါ။
လာမည့်ပြတင်းပေါက်၌ ကျနော်တို့ကပိတ်ထားရန် switch ကိုလျှော။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုတရားဝင်အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်ရမည်။
iCl7ကပိတ်ထားတဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်နည်း
iOS7သည် Find my iPhone function ကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူ activation lock - သော့ခတ်စရာမလိုပဲဤ function ကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း ဒီ bug ကိုသာ iOS 7.1 နှင့်အစောပိုင်းဗားရှင်းများတွင်ရရှိနိုင်သည် iOS7တွင်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားနေသည်မှာ Apple ကဤအမှားကိုမြန်မြန်ပိတ်လိုက်ပြီးအခြားမည်သည့် iOS 7.1.x နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်မှုကိုရပ်စဲလိုက်သည်။ အောက်ကဗီဒီယိုမှာဒီ bug လေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
ဗွီဒီယိုတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအဆင့်များစွာကိုလိုက်နာပါ iCloud အကောင့်ကိုသင်ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီး 'Find my iPhone' လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ထားနိုင်ပြီး၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထည့်စရာမလိုဘဲဤအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်.
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ထိတ်လန့်ကြပါဘူး အကယ်၍ သော့ခတ်ကုဒ်ကိုသင်၏ terminal တွင်ထားပါကဤလုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ.
iCloud configuration သို့သွားပြီး settings application အတွင်းတွေ့လိမ့်မည်။
iCloud အကောင့်ကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပြီးစကားဝှက်တောင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ iDevice ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုသော့ဖွင့်သည် (၎င်းတွင်စကားဝှက်မရှိပါ) ။
Settings menu ကိုသွားပြီး iCloud settings ထဲကို ၀ င်ပါလိမ့်မယ်။
delete iCloud အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ။
iCloud settings ဖယ်ရှားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပေးပါမည်။
ဤအဆင့်များပြီးသွားပြီဆိုလျှင်သင်သည်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမရှိဘဲ device ကိုပြန်ယူနိုင်သည်။ အတော်အတန်အန္တရာယ်များသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင့်မှတ်ဥာဏ်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်သော့ခတ်ထားသောစကားဝှက်မရှိပါကသာအလုပ်လုပ်သည်။
iCl 8 ကပိတ်ထားတဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်နည်း
iOS 8 မှာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူကသင့်ရဲ့ iCloud password ကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့အတွက်မူလ Mail app မှာလုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ bug ကို iOS 8.3 မှာရနိုင်ပြီး iOS version ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ devices အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤကျွမ်းကျင်သူ၏အဆိုအရ၊ Mail application တွင် bug တစ်ခုရှိပြီးအဝေးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော HTML code ကိုအီးမေးလ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီး tag တစ်ခု၏ကုဒ်နံပါတ်ထည့်သည်။ iCloud ရဲ့ login ၀ င်းဒိုးကိုအတိအကျကူးယူထားတယ်Apple ကမိမိကိုမိမိကိုယ်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုသူများဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုသောအခါတွင်လည်းအလားတူပင်။
ဒီကုဒ်ကိုဒါပရိုဂရမ်နိုင်ပါတယ် သံသယကိုရှောင်ရှားရန်သင်အီးမေးလ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်သည့်အခါအလုပ်လုပ်သည်။ iug သည်အလေ့အကျင့်ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud password တောင်းခံရန်အကြောင်းပြချက်မရှိသောကြောင့်ဤ bug သည်သံသယကိုမဖြစ်စေပါ။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် ၄ ​​င်းသည် system မှအမှန်တကယ်တောင်းဆိုမှုနှင့်မကိုက်ညီဟုထင်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားခြင်း (သို့) အမှန်တကယ်တောင်းဆိုခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Home ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ တောင်းဆိုမှုသည်မှန်ကန်ပါကစကားဝှက်တောင်းသည့်မျက်နှာပြင်မှ iOS ကိုခွင့်မပြုပါ။
ဒီဗွီဒီယိုထဲမှာ iOS 8.3 အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိရိယာတွေရဲ့စကားဝှက်ကိုခိုးယူဖို့ဒီအမှားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
iCloud မှသော့ခတ်ထားသော iPhone ကို iOS9/ iOS 10 / iOS 11 ဖြင့်သော့ဖွင့်နည်း
Device ကိုသော့ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Terminal နှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့်၏စကားဝှက်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ Application များကို သုံး၍ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် DoulCi အပလီကေးရှင်းအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပြီး Mac နှင့် Windows အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ The ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲက Apple နဲ့ဆင်တူတဲ့အတုအယောင်ဆာဗာတစ်ခုဖန်တီးပြီးအလုပ်လုပ်တယ် ၎င်းသည် device ကိုလုံးဝလှည့်ဖြား။ iCloud login ထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သောသော့တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပြီး ID အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ရလိမ့်မည်။
iCloud ကို Jailbreak လုပ်နိုင်ပါသလား။
များစွာသောသူတို့ jailbreak ကိုသုံးသောသူတို့၏ terminals များ၌ pirated applications များတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် iPhone မှကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးနိုင်သော်လည်း jailbreak သည်၎င်းအတွက်အရာပြုရုံသာမကသုံးစွဲသူများစွာ၏အဓိကအသုံးအဆောင်မှာ function များကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ device ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ Apple ကမပါဝင်ပါဘူး jailbreak မှတဆင့် iCloud Lock ကိုဖယ်ရှားရန်မည်သည့် tool မျှမရှိပါ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အော်ပရေတာတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ပါက terminal ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » သူတို့က iCloud အကောင့်ကိုစကားဝှက်မရှိဘဲဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
95 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
iOS4ရှိသည့် iPhone 7.1 အတွက်သာဖြစ်သည်
berdad mio သည် iPhone 7.1.2 နှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်
အငယ်တန်း perez ဟုသူကပြောသည်
Cloud account ကိုပိတ်ရန်အကူအညီတောင်းပါသလား။
Junior Perez အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း 4s ဗားရှင်းသည် ၇.၁.၂ သည်မိုaccount်းတိမ်အကောင့်ကိုကူညီရန်သင်မည်သို့စိတ်ဝင်စားပါသနည်း။
မင်္ဂလာပါဒီမှာ iphone516gb ဖြင့်တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် mega link ကိုချန်လှပ်ထားပါ၊ unzip လုပ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည်မော်ဒယ်များအားလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်အမှားတစ်ခုရခဲ့လျှင် antivirus ကို disable လုပ်ပါ။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
antivirus ကိုပိတ်ထားခြင်း ?? ဒါကဗိုင်းရပ်စ် (xD) လိုပဲ
မင်္ဂလာပါ၊ link ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့ချုံ့နိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဟိုဆေး "Azabel the Ripper" ငွေ ဟုသူကပြောသည်
puff သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုအလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊
Jose "the Azabel the Ripper" Silver ကိုပြန်သွားပါ
ဤကဲ့သို့သောဖိုင်မျိုးကိုသင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ၊ သူစိမ်းတစ် ဦး မှသင့်အားကောင်းမွန်စွာရေးသားနည်းကိုပင်မသိသူပေးထားသည့်အရာအတွက်သင်၏တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်မှုကိုပိတ်ထားသလား။ ကမ္ဘာကြီးဆိုးနေပြီ၊ သင်က backdoor ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိမပြုမိဘူး (သင်သတိမပြုမိဘဲနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကိုစုစုပေါင်း ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်) ။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့ဒေတာအားလုံးကိုခိုးယူပြီး ၀ က်ဘ်ကင်ကိုတောင်မြင်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ အကယ်၍ သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းပြချက်ပိုများလာပြီးဒီ malware အမျိုးအစားဟာအသုံးပြုသူအတွက် "မမြင်ရသော" နည်းဖြင့်နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဘာမှမစတင်ခြင်းဟုအထက်တွင်ပြောခဲ့လျှင်မည်သူကပြေးသည်ကိုငါမသိသင့်အားသင်၏ကွန်ပြူတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်။ Comodo ၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစကင်နာ၊ Hitman's သို့မဟုတ် Dr.
အဆိုပါ Ripper Azabel ဟုသူကပြောသည်
မာဂရက်ကအလုပ်မလုပ်တဲ့ဖိုင်ကို upload လုပ်တာဒါမှမဟုတ် link တစ်ခုတင်တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်။ အနည်းဆုံးတော့အရှက်မဲ့သူတွေပိုများလာတယ်။ အဲဒါကနည်းနည်းချင်းရဲ့အသင်း ၀ င်ဖြစ်လာပြီးလခရဖို့လိုတယ်။ x သူတို့ကတစ်ခုခုတောင်းပေမယ့်သင့်ရဲ့အချိန်ပျောက်ဆုံးသွားသော .. သင်ဝမ်းနည်းဖြစ်ကြသည်
အဆိုပါ Ripper Azabel မှ reply
ioutube 7.1.1 နဲ့ youtube မှာပေါ်လာတဲ့နည်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကောင့်ကိုဖျက်မထားဘူး၊ တစ်နေ့ကျတော့ငါ့ sim sim9pro ကငါ့ကိုအမှားလုပ်မိပြီး iphone ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ငါမှာအကောင့်ဟောင်းမရှိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ icloud အကောင့်ကိုရေးပြီး log in လုပ်ခဲ့တယ်။ အသံ၊ ကျွန်ုပ်၌အခြား icloud အကောင့်မရှိတော့သောကြောင့်တိုက်ပွဲများမရှိဘဲပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း my ကျွန်ုပ်၏ icloud ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
လှည့်လည်ကြည့်ရှုဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး iPhone 5c တွင်အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် t မိုဘိုင်းမှ iPhone 5s ရှိသည်။ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်စကားဝှက်မထည့်ပါ။ icloud အကောင့်တစ်ခုရှိပါသည်။ မူကွဲသည် ၇.၁.၂ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအကောင့်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ဗွီဒီယိုများကြည့်ခြင်းအားကျွန်ုပ်အားနမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းရှိမရှိသိလိုပါသည်။ ဒါကရလဒ်တွေကိုပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအောင်မြင်ခဲ့တာမရှိဘူး။ အခုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကငါ့ကိုဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး။ ဘယ်သူမှဝန်ဆောင်မှုမထားပါ။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။
ငါနှင့်အတူတူပဲငါ၌ iphone4= (
ငါ့မှာ 5c ရှိတယ်။ icloud ကိုဘယ်မှာဖွင့်ရမလဲမသိဘူး၊ ဘယ်ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ရမှန်းသင်သိပါသလား။
icloud ကိုသော့ဖွင့်ရန်အချိန်အခါများမရှိပါ။ စကားဝှက် jejejejjejejej ကိုသတိရပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကစကားဝှက်ပြောင်းလဲခြင်းကို appel တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြန်ပေးလော့ဟုဆိုလျှင်၊
အိန်ဂျယ်Joaquín Aranda Terrero ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Ipad5ကိုပိတ်ထားပြီး Icloud အကောင့်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏အမည်ဖြင့်သာရှိနေပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ angelaranda@correodecuba.cu ငါ့ကိုကူညီသောသူအားလည်းရက်ရက်ရောရော၊
Angel Joaquin ကို Aranda Terrero အားပြန်ပြောပါ
iPhone, configuration, General နှင့် reset ကို Restore လုပ်ရမယ်။ ဆက်တင်များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပါ။
သို့မဟုတ်သင် Icloud.com သို့ သွား၍ စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်တောင်းဆိုသည်။ ဒီမှာ။
အကယ်၍ ၎င်းတို့မှအလုပ်မလုပ်ပါက၎င်းကိုသင်၏တိုင်းပြည်ရှိ Ipod ဖြန့်ဖြူးသူထံသတင်းအချက်အလက်များကိုအရံသိမ်းဆည်းထားနိုင်မည်ဟုယူဆပြီးသင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
Machado 140795 ဟုသူကပြောသည်
ထိုဗီဒီယိုတွင် iphone ကိုသော့ဖွင့်ရန်အဆင့်များမှားနေသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်“ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုရှာပါ” နှင့်“ Remove account” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့ရှိရသည်။
kelvin soto ဟုသူကပြောသည်
သင့် iPhone icloud ကို iPhone device မှဖယ်ရှားရန်လုံခြုံသောနည်းလမ်းရှိသည်။ (၄ မှ ၆ + အထိ) ၁၀၀ ထိရောက်သော ... ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၄ ရက်မှ ၅ ရက်ကြာသည်။ သူကမင်းရဲ့စက်ကိရိယာ Imei ကတဆင့်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ fbwirelesstech2@gmail.com
kelvin soto သို့ပြန်သွားရန်
Moises Herrera Rodulfo ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ မိနစ် ၃၀ အတွင်း icloud ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်။ ၏သင်တန်းက၎င်း၏ Pros နှင့် Cons ရှိပါတယ်။ ငါ့ထံသို့ရေးပါ http://www.facebook.com/thedevilinpersondie
Moises Herrera Rodulfo အားပြန်ပြောပါ
ios 9.3.4 တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Yakusa ဝံပုလွေ ဟုသူကပြောသည်
ဒီနေ့ iPhone 6S ကို unlock လုပ်လိုက်ပါ
ဟယ်လို!! Help My Apple Watch ကိုဆက်သွယ်ခြင်းမပြုပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည် iPhone6နှင့်အတူရှိခဲ့သောအကောင့်ကိုမေ့ပြီးရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ iPhone ၌ကျွန်ုပ်၏အခြားအခြား Cel ၏ iCloud ကိုတောင်းသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိသောကြောင့် , ဤသူသည်ငါ၏ Cel အသစ်ဖြစ်သည်။ ငါ iCloud အသစ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်။
alex alfredo သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် iPl အဖြစ်အသုံးပြုရန်၎င်းကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည့် icloud အကောင့်ရှိသော iPhone 4S ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်၊ ဒါက imei 013047000926184, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Merruk နည်းပညာ ဟုသူကပြောသည်
ဤတွင်သူတို့ imei အားဖြင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ
Merruk Technolog အားပြန်ကြားပါ
merruk technolog, သင်၏ link ကိုစင်ကြယ်သောအမှိုက်သည်။
ချစ်ခင်ရပါသောကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ် iPhone 4s ၏ icloud ကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုပြုပြင်ရန်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
iphone 5s ဒါပေမယ့်သူကလူကို icloud မေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမက activate လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာကအဖြေရှိတယ်
ငါ့မှာသော့ခတ်ထားတဲ့ iPhone6ရှိတယ်၊ ICloud နဲ့ Imei ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဆော့ဗ်ဝဲတစ်ခုခုရှိသလား။
iCloud မှာ iPad 2. ကိုပိတ်ထားပြီးပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုဘယ်လိုဖယ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။
သင် iCloud အချက်အလက်လိုအပ်သည် (အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်)
Luís, ငါသိတယ်, ပြproblemနာကဒါဟာ second-hand ဖြစ်ပါတယ် ... ငါဒေတာမရှိပါ။
ငါ့မှာ¡ pad2ရှိတယ်။ ¡မို¡်းတိမ်၏စကားဝှက်ကိုငါမမှတ်မိ။ plsss ကိုငါဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ
ငါ့မှာ Ipad3ရှိတယ်၊ စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိဘူး၊ ငါဘယ်လိုဖွင့်နိုင်တယ်၊ ဖျက်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ICloud နှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိနေသည်။ အကောင့်ကိုစကားဝှက်မပါဘဲဖျက်ပစ်နိုင်သူတစ်ယောက်မှမရှိ။ ထို့ကြောင့်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသူနှင့်မျှဝေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Francisco Soliz ဟုသူကပြောသည်
Catalina မှာ iPhone6ရှိတယ်
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
francisco soliz သို့ပြန်သွားပါ
လူတိုင်းက iPhone နဲ့မင်းမကစားဘူး၊ ဟေးဟားဟားဟားဟားဟားဟားစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမ ၀ ယ်ရဘူး
Francisco က M ဟုသူကပြောသည်
Francisco M ကိုပြန်ပြောပါ
hahaha, ငါဟာ iPhone 5s ကိုသော့ခတ်ထားတာတစ်ခုပဲရှိမယ်လို့ငါထင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါတွေ့နိုင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုမျှဝေဖို့အဖြေကိုသိတယ်ဆိုရင်။
ငါ့မှာ iPhone 5s ရှိတယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုရောင်းလိုက်တာ၊ သူတို့မှာ icloud အကောင့်ရှိတယ်၊ ငါဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ အဲဒီနောက်မှာလူ၊
ကျွန်တော့်အကြောင်း aiclon ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့ဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ
တစ်ပတ်ရစ် iphone5ios 7.1.1 ကို ၀ ယ်ပြီး icloud အကောင့်ရှိတယ်။ Youtube ကိုရှာဖွေခြင်းကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးယခင်အကောင့်ကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ငါကမွမ်းမံလျှင်ယခင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုတောင်းလိမ့်မယ်မသေချာဘူး
sebastian rodriguez ဘိုဂိုတာ ဟုသူကပြောသည်
ဟေးဗီဒီယိုကဘာလဲ။ : c
sebastian rodriguez bogota သို့ပြန်သွားပါ
ဗီယာ mx ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် iPad3အတွက်မျိုးဆက် ၃ iPad ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်ဘာကြောင့်ပြသဖို့လိုအပ်ရတာလဲ။ သို့သော်ထိုတွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကို ၁၅၀၀ နှင့် ၃ x x ၂၅၀၀ တွင်ထားခဲ့၏။ သူတို့ရဲ့လူစုစုစည်းခြင်း၊ ဘက်ထရီ၊ ထိတွေ့မှု၊ မျက်နှာပြင်၊ ခလုတ်များ၊ ဦး ချိုများ၊ အိမ်များသို့ရောင်းချခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ သုံးခုထဲမှအသစ်တစ်ခုကိုတောင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ မည်သို့ voila ဘယ်လို disassemble နှင့်ပတ်သက်။ သင်ခန်းစာများ, နှုတ်ခွန်းဆက်သ,
Javier mx သို့ပြန်သွားရန်
Jorge Reyes ဟုသူကပြောသည်
hahahahahahahaha, မိုက်မဲသောဗီဒီယို၊ သင် iphone ကို pc keyboard ၌ထားခဲ့သည့်အချိန်တွင်မှတ်တမ်းသည်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဗီဒီယိုဖြတ်တောက်လိုက်သောဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ပါ။
Jorge Reyes အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ iPhone 5s ပွင့်နေပြီ။ ငါ icloud ကိုဖယ်ရမယ်။ အိုင်ဖုန်းကိုကျွန်တော့်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။ ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ သူကငါ့ကို iCloud ရဖို့ပန်းသီးအိုင်ကိုပေးတယ်။ icloud ကိုဖယ်ရှားရန်မည်သူမဆို program ရှိသလား။ ကျေးဇူးပြု။
အကောင့်တစ်ခုရှိသည့် iPhone ရှိသူမည်သူမဆိုငါ့ကိုအချို့ iPhone များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အခြားသူများကဲ့သို့သင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇီဝဗေဒတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ iPhone ဝယ်ခြင်းမရှိပါ။ iPhone တွင်မီနူးရှိပြီးအီးမေးလ်များဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်ရနိုင်သည်။ အကောင့်၊ ငါ့နံပါတ်ကိုထားခဲ့မယ်၊ ငါ့ကို ၉၉၀၄၄၄၄၄၄ လုံးချီလီမှာခေါ်ပါ
jean piero သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ iPhone 4s ရှိလား။ သူက icloud ကအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ လိုင်းတစ်ခုနဲ့ယူလာပြီးဘာမှမအစီရင်ခံဘူး၊ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး… ..
ကောင်းမွန်သောနံနက်ခင်းကို hotmsil.com တွင်ပြီးဆုံးသည့်ပန်းသီးအိုင်ဒီဖြင့်အိုင်ဖုန်း 4s ကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ hotmail.com ရေးသားသည့်အခါ s မှပြောင်းလဲခြင်းသည်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်သောအခါ၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်အိုင်ဒီမှကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်၊ သို့သော်ထိုအိုင်ဒီအတွက်စကားဝှက်ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိသောကြောင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ထို ID ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်မရှိသောအီးမေးလ်သို့လုံခြုံရေးကုဒ်တစ်ခုပို့ပြီးကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုသော့ဖွင့်မရခဲ့ပါ။ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တစ်ပတ်ရစ် iPhone 5s ကို ၀ ယ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ယခင်ပိုင်ရှင်၏ iCloud အကောင့်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ဖြေရှင်းနည်းရှိမရှိတစ်စုံတစ်ယောက်က ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့တစုံတခုကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် s.jmg@hotmail.com သို့မဟုတ် WhatsApp +573195107267 တွင်ငါ့ကိုရေးပါ
ဤကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို icloud ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမဖွင့်နိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားကူညီပါ။
မတည်ရှိသေးသောထိုအီးမေးလ်ကိုသင်ဖန်တီးရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းအီးမေးကို hack ပြီးကုဒ်ကိုကြည့်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်၌ iPhone5c နှင့် icloud ရှိသည့်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဘာမှမဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကုဒ်စာတစ်စောင်ပို့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဟယ်လို !! သူတို့ကသူတို့ရဲ့ iphone ကို icloud ကနေမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ (ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့အတူသူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အရမ်းဟောင်းနွမ်းသောစာပေဟောင်းအချို့ကိုတွေ့သည်။ )
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း iCloud သော့ခတ်တွင်ဖုန်းနံပါတ်ပါရမည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ iPhone 4s များတွင်ဖုန်းနံပါတ်မပေါ်လာပါ၊ ၎င်းသည်ပထမပုံရိပ်အဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် icloud အကောင့်ကိုဖယ်ရှားရန်အလားတူနည်းလမ်းရှိသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလေးအနက်ထားပြီးအမှန်တကယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသိသူတစ် ဦး လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာအလုပ်များရှိသည် .. ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှထွက်ခွာသည် guillermofarias38@gmail.com Whatsapp ၃၅၁-၆၁၈၀၁၉၄
ငါ့မှာ iPhone 5s ရှိတယ်၊ ငါတကယ်သုံးချင်တယ်၊ icloud ကပဲငါ့ကိုတားဆီးတယ် ။(
+52 044 656 312 8789 ကိုကူညီပါ
Johcsan Torres ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတောင်းတဲ့သူတွေကသူတို့ခိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ၀ ယ်တာကြောင့်ပဲ။ တရားဝင်ခိုးယူခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေမဝယ်ပါနဲ့။
ဟားဟား၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ Cloud ကိုဖျက်သိမ်းဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး၊ နောက်ဆုံးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းငါ့ကိုရယ်မောစေတယ်၊ ​​ဟုတ်တာပေါ့၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဟုတ်တာပေါ့။ ကျွန်ုပ်တွင်အိုင်ဖုန်းနှင့်အိုင်ပက်အကြားကွန်ပြူတာ ၂၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာ၊ အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်လျှင်၊ လူအများကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြပါ၊ ၎င်းသည်ဈေးကြီးလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်၊ စျေးကွက်တွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။ icloud ထုတ်လွှတ်မှုသည်မက္ကဆီကိုပီဆို ၂,၅၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။
Alfonso Zarate အားပြန်ပြောပါ
Alfonzo ၌ကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်အားငွေပေးရန်ကျွန်ုပ်အားအကြံပေးသည့်မည်သည့်စာမျက်နှာမဆိုကျွန်ုပ်တို့၌လိမ်လည်မည်မဟုတ်ပါ။
David Cruz ဟုသူကပြောသည်
iPhone 8plus ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ ကူညီပါ
david cruz သို့ပြန်သွားရန်
Gerardo GARCIA PAEZ ဟုသူကပြောသည်
ICLOUD ကိုအပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်ခြင်းအများဆုံးလမ်းကြောင်းများမှာနည်းများစွာရှိနိုင်ပေမယ့်စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်မှုကောင်းကောင်းရနိုင်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Apple MX HAHAHA နဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ORGINAL DUEL ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုရရှိခြင်းနှင့် Apple သည် VERSION ကို ၄ င်းတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများအကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြောပြခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများအကြောင်း၊ ပိုင်ရှင်၏အချက်အလက်များရှိခြင်း၊ စက္ကန့်နှစ်ခု၏လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ဆန့်ကျင်သည်။ ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ထောက်ခံမှုစာဖြင့်တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလှည့်ကွက်များဖြင့်တောင်းခံပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်သင်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒီမှာမလိမ်ပါနှင့်! GERAGP2011@HOTMAIL.COM
GERARDO GARCIA PAEZ အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ iphone 6s ရှိတယ်၊ icloud အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ။
heck ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယောက္ခမပိုင်ပြီးသူမဖုန်းအသစ်အတွက်အိုင်ဒီအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်များနှင့်ဘာမှမမှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ icloud အကောင့်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ငါ့မှာ ipl 6s ရှိနေသေးတယ်၊ သူတို့ကမင်းက r sim နဲ့ခုန်လို့ရမယ်လို့ပြောတယ်
နံနက်ခင်းပါမိတ်ဆွေများ၊ ဆိပ်ကမ်းပြင်ဆင်ရေးတွင်သင်၏ icloud စက်ကိရိယာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သော့ခတ်နိုင်ခြင်း၊ ပြorနာမရှိဘဲတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်၊ CERTIFIED TECHNICAL EQUIPMENT ပစ္စည်းကိရိယာများသော့ဖွင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်သီးသန့်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသောကိရိယာများကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Whatsapp + 52 2292225800
သင် Veracruz မှဖြစ်လျှင်၊ Hidalgo နှင့် Independencia Colonia Centro အကြား Francisco Canal 962 သို့ဆက်သွယ်ပါ
iPhone 5s iOS 11 ကိုသော့ဖွင့်နည်းသည်ဒုတိယအချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်က၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့သော့ဖွင့်ရမည်ကိုမသိရှိပါ။ သူတို့ကငါ့ကို j*****@www.l*****.cl ကနေအီးမေးလ်တောင်းကြတယ်။ အီးမေးဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်သူလဲကူညီတာလဲမသိဘူး။
ihpone5ကို icloud ဖြင့်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ
ICLOUD ကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်း ၃၀ နှင့် ၄၀ အကြားတွင် MODEL အပေါ်တွင် မူတည်၍ ဒေါ်လာ (၃၀) နှင့် (၄၀) အကြားတွင်ရှိသည်။
- ငါတို့သည်လည်း MAC ထံမှ EFI ဖယ်ရှားပါ
ငါ့မှာ Iphone 6s Plus ရှိတယ်၊ အဲဒါ icloud ကပိတ်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရေးပါ osniel86@nauta.cuကျူးဘားမှနှုတ်ခွန်းဆက်သ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ iCloud iPhone6or 6s ကိုသော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ ငါအာဂျင်တီးနားမှာနေထိုင်တဲ့သင့်နံပါတ်များကိုပို့ပေးပါ။ ဒီမော်ဒယ်ကစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အခြား iPhone မော်ဒယ်လ်ကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တွင်ကိရိယာအားလုံးရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည် လိုအပ်တဲ့ tools များနှင့်သော့ဖွင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မူလ iPhone s6 plus သော့ကိုဖွင့်ဖို့လိုပါမယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒါကိုဒုတိယအ ၀ ယ်ဝယ်ပြီးစက်ရုံကနေပြန်လည်စတင်သောအခါယခင်လူ၏ iCloud ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး Messenger နှင့် wasap မှတစ်ဆင့်ငါစကားပြောနေစဉ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ်။ ငါပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုဆက်မဆက်သွယ်နိုင်တော့ဘူး
iPhone 6s Plus ကိုသော့ဖွင့်ရန်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ နေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်၌ 6gb iphone 128s ရှိသည်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့ informatics အားလုံးကိုမေးတယ်။ Gmail @ Nve2251 com
Young_usher @ hotmail com
ဟဲလိုငါ့နံပါတ်60039 328 mail: gato.cuba0722160@gmail.com ငါ့ကိုကူညီနိုင်မည့် icloud ဖြင့်ပိတ်ထားသော iphone 73s ကိုပိတ်ထားပြီ
ဟဲလိုကျွန်တော့်မှာ icloud အကောင့်တစ်ခုပါသော iPhone 6s သော့ခတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါကို ituns နဲ့အတူယူထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမွမ်းမံလို့မရပါဘူး၊ ငါ့ကို xfa 9982319697 unlock ကိုကူညီပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကကျွန်ုပ်စျေးဝယ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင် 6s များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်ကဖုန်းမဆက်ခဲ့ပါ။ သူနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းရှိမရှိသိလိုပါသည်။ \_ t
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီကိုပေးသော ipl7နှင့် 6s တို့သည် icloud ကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ရှိသည်
icloud အကောင့်ကို iphone 6s မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Victor Hugo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါအမည်မသိ; ငါ့မှာ iphone6(16gs) သော့ခလောက် icloud ရှိတယ်။ ios1.4.1 ကိုပြန်ယူလိုက်ပါ။ အဲဒါကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုပါ။ ၎င်းကိုသော့ဖွင့်နိုင်သလားဆိုတာသင်သိလိုသည်ကိုသိချင်ပါတယ် ...
hi atte victorio2006@gmail.com ဒါငါ့ရဲ့အီးမေးလ်ပါ ..
ငါ Bariloche ကပါ .......
victor hugo အားပြန်ကြားပါ
Alfredo MOran Lem ဟုသူကပြောသည်
ငါ iphone ကိုသော့ဖွင့်ဖို့အကူအညီလိုတယ်
Alfredo MOran Lem အားပြန်ကြားပါ
လီယိုနာဒို Bautista ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့ Iphone 6s ပြောင်းရန်ပြောင်းလဲချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ရောက်သည်အထိမစစ်ဆေးသင့်ပါ။ ဖုန်းကိုစက်ရုံပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးသင်မသိကြောင်း Icloud အကောင့်ကိုမေးမြန်းပါ။ ငါ့ကိုထောက်ခံပါ။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားပြီသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းနည်းရှိသေးသည်
Leonardo Bautista အားပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါ
မိုဘိုင်းပြင်ဆင်မှုမှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအနက်ရောင်စာရင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ icloud ရှိသည့် iPhone7ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုယူပြီးသူတို့ကသော့ဖွင့်ပြီးဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ငါသည်သူတို့၏ WhatsApp နံပါတ် 2292225800 မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုအကြံပေးသည်၊ Fb စာမျက်နှာများစွာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချိန်ကကျော်လိမ်ခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသောအမှိုက်သရိုက်များ၊ စနစ်အတွင်း၌လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းပါ။ $% / &% လိုပဲကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်တာကအတိအကျဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အဲဒီလိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်အဖွားကသူမဆီကို iphone ကိုပို့လိုက်တယ်။ အဲဒါက xr ပါ။ ဒါပေမယ့်သူမကအရာရာကိုမေ့သွားတယ်။ သူမကအီးမေးလ်ဒါမှမဟုတ်စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိဘူး။ ငါဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
Apple က iPod Nano နှင့် iPod Shuffle ကို၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးများမှဖယ်ရှားခဲ့သည်